Home » Featured » FilmLight dia manangana ady mangatsiaka mitady ny 'Amerikaner'
Ny enina enina dia nomena ho HDR sy 4K Ultra HD amin'ny Technicolor PostWorks
Ny andiany faha-enina sy farany nahazo an'i Emmy nahazo ny Amerikanina, mpitsikilo mpitsikilika napetraka tao amin'ny 1980 nandritra ny Ady Mangatsiaka, vao haingana tao amin'ny HDR sy 4K Ultra HD amin'ny Technicolor PostWorks any New York. Hatramin'ny sehatra roa, ny endriky ny andian-dahatsoratra farany dia ny andraikitr'i John Crowley, Senior Digital Colourist, izay miasa amin'ny rafi-pamokarana Baselight avy amin'ny FilmLight.
Toy ny andiany faharoa tao amin'ny 2014, raha nanampy an'i The Americans ny talen'ny Produçteur Dan Sackheim, ny tanjona dia ny hamorona endrika fijery ankapobeny. Ny mpamorona ny programa koa dia niatrika ny fanamby amin'ny fandikana ny fifandanjana mety amin'ny fahitana televiziona ao amin'ny 80s sy ny fijery maoderina izay manantena fa ho androany izay ho an'ny andiany enina, misy 4K Ultra HD ary HDR. Ary ny zava-drehetra dia tsy maintsy notanterahana tamin'ny tetibolan'ny fahitalavitra sy ny fotoana fohy.
David Woods sy Crystal Whelan dia mpanamboatra mpamokatra, novokarin'ny Fox 21 Television Studios sy FX Productions ho an'ny FX Network.
"Sarotra foana ny manatanteraka ny tanjaky ny tantara ary ireo tranonkala ireo dia miaina ao anaty teboka fototra tariby," hoy ny mpamokatra Woods. "Ary toa nitombo isa ny isan'ny fiantraikan'ny fahitan'ny maso isaky ny vanim-potoana. Ary koa ny fanirian'ny tantara dia nanao izay tsara indrindra vitantsika ihany koa izahay mba hahatonga an'i 2018 New York ho tahaka an'i 1987 Washington sy Moscow. "
Rehefa nanao famelabelarana setrin'ny 35 taona lasa izay tany Washington sy Moskoa, fa nitifitra ireo toerana tany New York City, iray amin'ireo fanamby dia ny hanafina ireo zavatra izay hanome ny fandehanana. Izany dia lasa zava-dehibe roa ao amin'ny HDR sy 4K izay mampitombo ny famahanana sy ny antsipiriany bebe kokoa amin'ny fanovàna ny antsipiriany, ka ny iray amin'ireo asa nataon'i Crowley dia ny hampiasa ireo fitaovana fanaraha-maso mahomby ao Baselight mba hanairana sy hanafina zavatra sy tsy fahampiana.
Ny fizarana tsirairay dia vita HD ary ny SDR, miaraka amin'i Crowley mipaka amin'ny fanovana mihidy. Navoakany matetika ny lisitry ny fanapahan-kevitra novolavolaina tao amin'ny laminasa momba ny Metadata FilmLight BLG, izay nahafahan'ny mpamoaka lahatsoratra sy mpandinika tsara mba hahazoana ny mari-pahaizana farany amin'ny Baselight mazoto, ny Plugin Baselight for mazoto Media Composer.
"The mazoto Ny asa fandaharam-potoana ao Baselight dia nanome antsika ny fahafaha-mamaritra ny loko farany sy ny vokatr'ireo sary eo amin'ny efamira fanovana alohan'io efa nataontsika teo aloha io, " Nanazava i Crowley. "Afaka nanombantombana ireo fepetra manan-danja izahay izay nanosika ireo sisin-tany ivelany, ary afaka manome ny sary farany momba ny lokom-pamokarana mankany amin'ny dingana mifangaro avy hatrany amin'ny efitrano fanovana, izay namonjy fotoana sarobidy izahay."
Vantany vao vita ny fandaharana SDR, dia namorona HDR ny Crowley.
"Nisy faniriana mafy ny hitazona ny fijery efa natombokay nandritra ny fizaran-taona dimy HD sy UHD, SDR ary HDR, " hoy i David Woods mpamokatra. "Nanam-paniriana ny hiditra ao anatin'ny vanim-potoana aho saingy tamin'ny farany, dia tena nahagaga ny fomba nahatonga an'i John Crowley haingana sy somary toa tsy nahitam-peo hitodika amin'ny SDR ho HDR. Baselight no fitaovana tsara indrindra hitako raha niova teo amin'ny roa. "
"Tena nahomby ilay dingana," nanampy an'i Crowley, "Ary nirotsaka ny dingana iray manontolo tsy misy fiatoana."
"Ho anisan'ny seho toy ny tombontsoa faratampony," Nofintininy izany. "Ny sary manintona, ny fanehoana mazava tsara, ny asa mahatalanjona sy ireo soratra manintona dia nangataka ahy ho ambony indrindra amin'ny lalao ho an'ny fizarana tsirairay. Mahatsiaro ho sambatra aho fa nandray anjara tamin'ny fahombiazan'ny fampisehoana. "
Ny andian-dalan'ny Amerikanina no nahazo ny loka Emmy ho mpilalao sarimihetsika tao amin'ny andian-tantara fampisehoana izay nandeha nankany Matthew Rhys, ary koa ny Emmy Award noho ny fanoratana an-tsoratra tao amin'ny andiam-panohanana ho an'ireo mpiara-manamboatra an'i Joel Fields sy Joe Weisberg.
Imagine Communications Provides Production Flexibility and Quality in New OB Truck for tpc Switzerland - Janoary 22, 2019
Argosy brings intelligent power management and mission-critical cabling for AV, broadcast and smart homes to ISE 2019 - Janoary 16, 2019
FilmLight activates v5 for Baselight STUDENT - Janoary 15, 2019
4K Ultra HD Baselight Ady mangatsiaka Colorist Color mitontongana colourist Crystal Whelan Dan Sackheim David Woods Emmy Award filmlight Fox 21 Television Studios FX Network FX Productions HDR Joe Weisberg Joel Fields John Crowley Matthew Rhys MKM Marcomms MKM Marketing Communications Technicolor - PostWorks The Amerikana	2018-10-29
Previous: Nizara ny Live Series Facebook niaraka tamin'ny URSA Broadcast sy ATEM 4 M / E Broadcast Studio 4K